I-Second Street Serenity Cottage
Igumbi lokulala elilodwa kanye nebhavu elilodwa lokubuyela emuva elithokomele futhi elibukekayo endaweni eyimfihlo eyihhafu yehlathi lemvula laseHawaii elivundile imizuzu nje ukusuka eVolcanoes National Park. Indawo yethu ilungele ukuhlala, noma njengendawo yokusebenza usuka ekhaya. Kufakwe nophahla oluhle oluvundlile, ikhishi eligcwele, indawo yokudlela enelanga kanye ne-lanai - lesi sikhala silungele imibhangqwana noma abazulazula abathule abafuna ukujabulela le ngxenye yomhlaba emangalisayo. Sicela uqaphele ukuthi sigxile ekubeni nendawo ehlanzekile ukuze uphephe.
Ukuqedwa kwangaphakathi kuyikhwalithi enhle kakhulu, enamafasitela anamapulangwe amabili, kanye ne-vinyl flooring esindayo yamapulangwe kulo lonke. Umatilasi we-Queen size, igumbi lokugezela elikhulu elinendawo yokuwasha, igumbi lokuhlala kanye nekhishi / indawo yokudlela. Ikotishi lingamafidi angu-484 sq., eliklanywe ngokwezifiso umsingathi/umnikazi ohlinzeka ngolwazi lomuntu siqu kakhudlwana kubavakashi. I-TV isegumbini lokulala, kodwa ungase ungafuni ukuyibuka ngoba ufuna ukuhlala phansi uphuze inkomishi yekhofi noma ingilazi yewayini phezu kwe-lanai emboziwe ukuze ubukele imvula.
4.96(112 okushiwo abanye)
4.96 · 112 okushiwo abanye
Impahla iyimfihlo kakhulu futhi ithokomele. Amaminithi okuya e-Hawaii Volcano National Park, izindawo zokudlela e-Volcano Village, futhi zithutheleke ehlathini elihle eliyingqayizivele le-Mauna Loa Estates efiselekayo.... uzofika ekhaya endaweni yokucasha eshisayo, ehlanzekile, entsha, efudumele nethokomele. Imizuzu emine ukusuka e-Hawai'i Volcanoes National Park e-Big Island, lesi isisekelo esikahle sokuvakashela leli paki futhi simaphakathi neKa'u nePuna.
Esigodini saseVolcano kunezindawo zokudlela ezinhlanu, izitolo ezijwayelekile ezimbili, neposi. Imakethe yomlimi iba sesigodini njalo ngeSonto lapho ungathola khona ukudla, umkhiqizo wendawo, ikhofi, uju, nemisebenzi yezandla.
Ukudla kwasendaweni kufaka phakathi iloli lokudla lakwa-Aunti Pons Thai, i-Lava Rock Cafe, i-Thai Thai Bistro ne-Bar, i-Ohelo Cafe, i-Eagle's Lighthouse Cafe, i-Cafe Ono, i-Uncle George’s Lounge e-Volcano House, i-Kīlauea Military Camp Starbucks kanye nesitolo sokudla kanye ne-Kilauea Lodge.
Umsingathi utholakala ngefoni, i-imeyili noma umbhalo.
Inombolo yepholisi: STVR-19-358255. NUC-19-1012